ကျွန်တော်နဲ့ မပုတင် ဟိုအရင်ကဇာတ်လမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော်နဲ့ မပုတင် ဟိုအရင်ကဇာတ်လမ်း
ကျွန်တော်နဲ့ မပုတင် ဟိုအရင်ကဇာတ်လမ်း
Posted by Ko chogyi on Aug 16, 2014 in Creative Writing | 26 comments
အချိန်ကာလက လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀ ခန့် မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ခေတ်ပြောင်းတော်လှန်ရေး မဆင်နွှဲမှီ ၂ နှစ်အလို (၁၉၈၆ ခုနှစ်လို့ ရေးရင်ရသားနဲ့) ကျွန်တော့်မွေးဇာတိမြို့လေးရဲ့ အထက(၂) ဆိုတဲ့ ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ဆဌမတန်းပညာသင်ကြားနေချိန်ပေါ့
မြို့နယ်လဝက ကနေ ကျောင်းမှာ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်တွေလာလုပ်ပေးပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတွေ စာမသင်ရဘဲ ရုတ်ရုတ်သဲသဲနဲ့ဆိုတော့ ပျော်တာပေါ့
ကျွန်တော်အလှည့်ရောက်တော့ ဖြည့်လိုက်ရတဲ့ပုံစံတွေ ဆွေစဉ် ၇ ဆက်အမှန်ဖြည့်ရတာလက်ကို ညောင်းရော ကျွန်တော်က မိဘတွေနဲ့ခွဲပြီး ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်တည်း နေခဲ့တာဆိုတော့ အချက်အလက်တွေ မှတ်ထားသလောက် ကြိုးစားဖြည့်ရတာပေါ့ အဖေရဲ့အမေ ကျွန်တော့်အဖွားက အဖေညီကျွန်တော်ဦးလေးနဲ့ ကျုံပျော်ဆိုတဲ့မြို့လေးမှာလိုက်နေတာ အဲဒီအချိန်မှာလည်း ကွယ်လွန် သွားပြီ ဒါကြောင့်မို့ အဖွားမှတ်ပုံတင်အမှတ်မသိလို့ ကွယ်လွန်ဆိုပြီးတော့ပဲ ဖြည့်လိုက်တယ်
အဲဒါကို လဝက ဦးဦးကြီးက မင်းအဖွားဆုံးတဲ့နှစ်က မှတ်ပုံတင်တွေလုပ်ပေးပြီးတဲ့ နှစ်မှာဆုံးတာ မှတ်ပုံတင်မရှိလို့မရဘူးတဲ့ အဲဒီနံပါတ်မရရင်မင်းလည်း မှတ်ပုံတင်မရဘူးတဲ့ အဲဒါနဲ့ကျုံပျော်ကို ဖုန်းမရမကခေါ် ဦးလေးရုံးကတစ်ဆင့် ဦးလေးကိုမေးပြီး ဖြည့်ခဲ့ရတယ် အဲဒီအချိန်က တယ်လီဖုန်း ခေါ်တာမလွယ်လှဘူး ကျောင်းကနေ အိတ်ချိန်းရုံးကိုခေါ် ပြီးရင် ခေါ်ချင်တဲ့ မြို့နဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ပေး ဖုန်းလိုင်းအဆင်ပြေပြီဆိုမှ အိတ်ချိန်းက ကျောင်းကိုပြန်ခေါ် အရမ်းအလုပ်ရှုပ်တာ
ကျွန်တော် အဲဒီလဝက ဦးကြီးတွေရစ်လို့ မကျေနပ်ဘူး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်တော့ သူတို့လည်း တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအရစ်ခံရ အဟောက်ခံရလို့မကြည်ကြဘူး ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ လောင်းကြေးထပ်ကြတယ် လဝက ဦးဦးရဲ့ ပိကတ်အပြာကို မြေဖြူသုတ်နိုင်တဲ့သူ မုန့်အဝစားဆိုပြီး လုပ်ကြတာ အောင်မြင်သွားတယ် ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကတော့ ဒေါပွနေတဲ့ လဝကကြီးကို တော်တော်တောင်းပန်လိုက်ရတယ်
အဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်လို့ခေါ်တဲ့ မပုတင်ရသွားပါတယ် သိပ်လည်းအရေးမထားမိပါဘူး
၁၉၉၁ ခုနှစ် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအောင်ပြီး ကျောင်းဆက်တက်လို့မရသေး ယောင်လည်လည်နဲ့ အားနေတဲ့အချိန် အမေက ဗန်းမော်ဆောက်လုပ်ရေရုံးမှာတာဝန်ကျနေချိန် ပုဂံအိမ်ကပစည်းတစ်ချို့ သယ်ပြီး ဗန်းမော်လိုက်လာခဲ့ ဗန်းမော်ဆိပ်ကမ်းမှာလာကြိုမယ်ဆိုလို့ မန်းဂေါဝိန်ဆိပ်ကနေ ပန်းတော် ဆိုတဲ့နှစ်ထပ်ရေယာဉ်နဲ့ ထွက်လာခဲ့တယ် (သင်္ဘောပေါ်က ဇာတ်လမ်းတော့ နောက်မှရေးတော့မယ်)
ဗန်းမော်ဆိပ်ကမ်းကိုရောက်လို့ ကုန်းဘောင်လို့ခေါ်တဲ့ပျဉ်ပြားပေါ်ကအဆင်းမှာ စတွေ့တာပါပဲ ညီလေးမှတ်ပုံတင်ခဏပြပါတဲ့ ဘုကြည့်ပြန်ကြည့်ရင်း ဘာဖြစ်လို့လဲ ဘာလုပ်ဖို့လည်းပြန်မေးတာပေါ့ ခဏပြပါ တာဝန်အရပါတဲ့. သင်္ဘောပေါ်ကဆင်းရုံရှိသေး လူအများထဲ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲရွေးစစ် တော့ တင်းတာပေါ့ မှတ်ပုံတင်လေးထုတ်ပြတော့ မှတ်ပုံတင်လေးဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်ကြည့်လိုက် လူကို ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် အဲရောကုန်ပြီ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်လိုက် လုပ်နေတုန်း အမေရောက်လာလို့ ပြေလည် သွားတယ်
ရုံးကပေးထားတဲ့အိမ်ကိုရောက်ပြီး နောက်တနေ့ ခြံထဲဆင်းထိုင်နေတုန်း မနေ့က လဝက ကိုကို တွေနဲ့ တွေ့ပါလေရော လဝကရုံးနဲ့ခြံချင်းကပ်လျှက်လေ တိုတိုပြောရရင်သူတို့နဲ့ခင်ပြီး ဘော်ဒါ တွေဖြစ်သွားရောဆိုပါတော့ ဗန်းမော်ရောက်ခါစ မှတ်ပုံတင်စစ်ခံရတာ အစာမကြေသေး ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းမေးကြည့်တော့ ဒေသခံတွေကြား ကျွန်တော်က ပေါက်ဖော်ကြီးရုပ်ထွက်နေလို့ အပိုင် ဆိုပြီးဝိုင်းလာကြတာတဲ့
ကျောင်းကလည်းမတက်ရသေး အချိန်တွေအားနေလို့ (အခုခေတ်လို ကွန်ပြူတာသင်တန်းတွေ ဘာသင်တန်း ညာသင်တန်းတွေလည်းမရှိဘူး) အမေရုံးမှာ နေ့စားရုံးအကူဝင်လုပ်ပါတယ် အမေက မန်းကိုရုံးကိစသွားဖို့ရှိရင် ကျွန်တော့်ကိုလွှတ်တယ် ကျွန်တော်ကလည်း ခရီးသွားရတာဝါသနာ ပါတယ်လေ တစ်ခေါက်မှာ ဗန်းမော်က မန်းကိုအဆင်း ပစည်းထုတ်မယ့် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်လည်းပါတယ်
ကသာမှာ ကုန်တွေချရင်းသင်္ဘောညအိပ်နားပါတယ် ည ၉ နာရီလောက်မှာ သင်္ဘောပေါ်ကို ရဲနှစ်ယောက်နဲ့ လူတစ်ယောက်တက်လာတယ် မှတ်ပုံတင်တွေတောင်းကြည့်လို့ ခရီးသွားတွေ လည်းထုတ်ပြကြတာပေါ့ ကျွန်တော်အလှည့်ရောက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ပြီး “မင်းမှတ်ပုံတင်ကအတုပဲ” လို့ပြောတယ် ကိုယ်ကလည်း စိတ်ကသိပ်ရှည်တာဆိုတော့ မင်းက ဘာကောင်လဲလို့ ပြန်မေးတာပေါ့ သူလည်းရှုးရှုးရှားရှားဖြစ်သွားပြီး ” ငါက လဝကကွ တာဝန်အရ စစ်တာလို့” ပြောတယ် ကျွန်တော်ကလည်း မင်းတာဝန်အရဆို ယူနီဖောင်းဝတ်လာကွ ငါမှတ်ပုံတင် အတုလို့ပြောရအောင် ဘာကြောင့်ပြောတာလည်း မင်း လဝကအတုဖြစ်မယ် ဝန်ထမ်းကဒ်ပြလို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်
အဲဒီအခါ သူက မင်းမှတ်ပုံတင်မှာ အသားတံဆိပ်(သံတံဆိပ်တုံးနဲ့ ရိုက်တာပါ) မပါဘူး မင်နဲ့ရိုက် ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်. ကျွန်တော်က မင်းလဝကအတု သေချာသွားပြီ ဆယ်နှစ်ပြည့်ကဒ်မှာ အသားတံဆိပ်မရိုက်ဘူး မင်နဲ့ပဲရိုက်တယ် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ အသားတံဆိပ်ရိုက်တာ လို့ပြန်ပြော လိုက်တယ် (ဘေးခြံက လဝကရုံးဆိုတော့ နည်းနည်းပါးပါးသိတာပေါ့) မင်းက ဒီအရွယ် ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးဘူးလားဆိုပြီး ထပ်ရစ်ပြန်ရော ကျွန်တော်က မင်းဘာမှလည်းမသိပါလား ဒီမှာကြည့် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး တစ်နှစ်အတွင်းလဲခွင့်ရှိတယ်ကွ ကဒ်ပြားမှာ နောက်ဆုံးလဲရမယ့်ရက်ပါတယ်လို့ ပြော လိုက်ပါတယ်
သူကိုအတုလို့ပြောလို့ ဒေါသတွေအရမ်းထွက်သွားတယ် ဘေးကပါလာတဲ့ရဲ ၂ ယောက်လည်း အခြေအနေမကောင်းမှန်းသိတယ် ကျွန်တော်ဘေးက အင်ဂျင်နီယာကလည်းဝင်ပြောတယ် ကျွန်တော်တို့က ဆောက်လုပ်ရေးက ဝန်ထမ်းတွေပါ တာဝန်နဲခရီးသွားတာပါဆိုပြီးပေါ့ အဲဒီအချိန် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံး ယူနီဖောင်းဝတ်ထားပါတယ်
ရဲတွေလည်းသူတို့လူသူတို့ဆွဲခေါ်သွားတယ်. ကျွန်တော်လည်း မန်းရောက်တော့ အမေဆီဖုန်း နဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီး အလုပ်ပြီးတော့ ဗန်းမော်ကိုမပြန်ဘဲ ဇာတိမြို့ပြန်ပြီး ၁၈ နှစ်ပြည့်ကဒ် လဲလိုက်ရတယ် မလဲလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူး ဒီလမ်းကိုသွားနေသရွေ့ ခဏခဏကြုံနေရဦးမှာလေ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘဝတစ်ကွေ့က မပုတင်ဇာတ်လမ်းလေးပါ……….
မပုတင်ကတော့ ပြောရရင်မောပါတယ်။ နိုင်ငံသားအစစ်ကြီးတွေကိုကျတောင်းလိုက်တဲ့ သက်သေတွေ။ တခုလောက်မပါရင်ပဲ ခိုးဝင်လာတဲ့သူလိုလိုဘာလို။ အဲ့ခိုးဝင်လာသူတွေကျတော့ဘာသက်သေမှမလို။ ဒန်ဆိုတန်းရ။ ဟိုးသေသွားတဲ့အဘွားရဲ့အဖေအမေတောင်နာမည်စုံအောင်မသိနိုင်တာ ဟိုးအဖွားရဲ့ အဘိုးအဘွားဆိုတော့ လေပါတယ် ( ခွဒစ်တူမိဂီ ) အဲ့ အခုသားအလှည့်ရောက်တော့ ဘာမှမလိုတော့ဘူးတော့။ အဘိုးအဘွားထိပဲလိုတော့နယ်။ ဖြည့်ရတာတရွက်ထဲ။ အဲ့ဒါပေမဲ့ ရစ်ရအောင်တော့ရစ်သေးသမို့ သုံးသောင်းပေးတော့ မရဘူးခေါင်းခါနေတဲ့ပြသနာကြီးက ဒန်ဆိုရသွားကော
မသဲရေ သားတို့အလှည့်မှာသိပ်မဖြည့်ရတော့ဘူး ဘာလို့လည်းမသိ
ကျုပ်တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ဘုရားသွားရင် မှန်ပုံးထဲကို ပိုက်ဆံစေ့လေးထဲလိုက်တဲ့အခါ အထဲက အရုပ်ကလေးတွေ ကတဲ့ဟာမျိုး တွေ့ဖူးတယ် စာရေးသူတော့တွေ့ဖူး ကြားဖူး သလားမသိဘူးဗျ။
အခု မပုတင်လည်း အဲလိုပါဘဲ ပိုက်ဆံလေးများထဲ့လိုက်ရင် ……………….. အဲ ငါဘာတွေမန့်နေမိပါလိမ့်။
ကိုခင်ခရေ ကျွန်တော်ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း အဲဒီအချိန်က မှတ်ပုံတင်မရဘူး
Frc ပဲရတယ် ခရီးသွားရင် ရောက်တဲ့မြို့မှာ လက်မှတ်ထိုးရတယ်
အခုပြန်ဆုံတော့ မင်းအရင်လို ခရီးသွားရင် လက်မှတ်ထိုးရသေးလားဆိုတော့
ငါ့မှာအခု နာမည်သုံးမျိုးနဲ့ ၃ ခုတောင်ရှိတယ်တဲ့
ကျနော်နဲ့ကိုချို လမ်းပြောင်းပြန်ဝင်တုံးက ဘယ်ကဒ်လေး ပေးလိုက် လဲ ဗျိုး
မှတ်ပုံတင် မရှိပဲ နေနေတာ ၅ နှစ်လောက်ရှိပြီ ၊
အဲသလိုပါပဲ ၃ သောင်းတောင်းလို့ သောက်ညင်ကပ်ကပ်နဲ့ မလုပ်ပဲထားတာ ၊
ခရီးသွားရင် ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံစာ ( ဓါတ်ပုံနဲ့ )
ပြီးတော့ မပုတင်ပျောက်ဆုံးကြောင်း ထောက်ခံစာ ၊
ကုမ္ဖဏီဝန်ထမ်းကတ် ဒါနဲ့ပဲသွားတာ ၊
အခု မိုးပွင့် အဆင့် ၆ တဲ့ ၊ ရပ်ကွက်ထဲ လာရင် လုပ်မယ် ၊
စီမံချက်လာရင်လုပ်ထားအစ်ကိုရေ တစ်ခါလောက်ထပ်စုံစမ်းကြည့်ပါဦး အခုအရင်လိုသိပ်မတောင်းလောက်ပါဘူး
မပုတင်ဆိုလို့ ခုတော့ အရင်လောက်မခက်တော့ပါဘူး…ဒါပေမဲ့ “အပိုင်းလေး”ကတော့ ရှိနေသေး…
သုံးသိန်းအောက်ဆိုတော့လည်း တရားတော့ဝင်သားဗျ ဟ ဟ
စာမသင်ရပဲ.. ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ..ဖြစ်ရင်…ပျော်တယ်ဆိုတာတော့…
ဖွေးဖွေးအကြောင်းလေးများ ပါမလားလို့ .. ။
အနော်တို့ 10နှစ်သား မပုတင်လုပ်တုန်းကဆိုရင် အနော့အဖေကတော့ သမရှယ်ရာဝင်မို့လားမသိ? ရလိုက်တာမှ ရှောရှောရှုရှုပဲ။ 18နှစ်ပြည့်လုပ်တုန်းကဆိုရင်တော့ အိမ်နဲ့ရုံးနဲ့ကို ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်ရယ်။
အခုချိန်မှာ ပုံမှန်မှတ်ပုံတင်လုပ်တာတော့ လွယ်သွားတယ်ဗျို့
ဒါပေမယ့် ပုံစံ ၁၀ ပြောင်းတာဘဲခက်နေတာ ။
ဒါပေမယ့် နိုင် ၃ (က) ဆိုရင်တော့ ခက်သေးတယ်
တိုင်းအဆင့်အထိ တင်ရသေးတယ်ဆိုပဲ ။
ကျွန်တော်အတွက်တော့လွယ်တယ် သူတို့ပြောတာ ပုဒ်မ၅ အရတဲ့
နောက်ဆုံးခရီး .. အဲ .. နောက်ဆုံး ဖော်ပြထားတဲ့ ခရီးမှာ မပုတင် လာစစ်တော့ …
လာစစ်သူကို ပြန်စစ်ချလိုက်တာလေး မိုက်ဒဗျာ …
ထပ်ရစ်နေရင်လည်း ခညားက ဗလ ကောင်းတာပဲ …
ဆွဲသာ ထိုးပလိုက် … ဟီဟိ ..
ကျော်နဲ့ မပုတင် အမှတ်တရ ကတော့ မြဝတီ က ဥငေးတို့ဆီကို သွားတုန်းက ခရီးစဉ်ဘဲ …
အဲ့တုန်းက မပုတင် ကိုင်ထားတာတောင် ၅ ရာ၊ ၁ ထောင် ပေးလိုက်ရဒေးဒယ် …
စပယ်ယာတွေကလည်း ပြောဒယ် …
အဲ့ဒါ ဒီလမ်းရဲ့ ထုံးစံပဲတဲ့ …..
ဒါကြောင့် .. ခရီးသွားတွေက အဲ့ဒီမြဝတီ သွားတဲ့ လမ်းကို သူတောင်းစား လမ်းကို ခေါ်ကြတာ …
အခုနောက်ပိုင်းတော့ .. ဘယ်လိုလည်း သိဘူး …
ကိုယ်လည်း ၂၀၀၁ ခုနှစ်လောက်က
အရေးကြီးလို့ အချိန်မှီသွားရမှာ လေယာဉ် ၃ ရက်လောက်မထွက်တာနဲ့
မှတ်ပုံတင်နဲ့ ဝန်ထမ်းကဒ်လေး နှစ်ခုကိုင်ပြီးသွားရတာ
လဝကဆို ဝန်ထမ်းကဒ်လေးပြ မှတ်ပုံတင်သွားပြရင်
သူတို့ကိုကြည့်ခပေးရတယ် ၅၀၀/၁၀၀၀ နဲ့ ဂိတ်တွေကလည်းများပါ့
ခရီးအစ အဆုံးဆို တစ်သောင်းလောက်မြောက်တယ်
သများးး ဇာတ်လမ်းလေးးး ဘယ်တော့လောက်????
လာမယ် ဒီတစ်လ အတွင်းတင်ပေးမယ် အလုပ်များနေလို့
Can be on 1st Sep..??
It is my day..
May be, I will try.
ခုထိ ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့် မလဲရသေးဘူး
ကျနော်လည်း မိုးပွင့်ကို စောင့်နေတာ
သကြားရယ် ရပါတယ် ရုပ်ကနူပါသေးတယ်
လောလောနဲ့ ဖတ်လိုက်တာ န ငယ်က အမြီးပါ ပါနေတော့ နူ ဖြစ်သွားတယ်
တော်သေးးတာပေါ့ နု လို့ ပြောတာမို့
မပုတင်ဇာတ်လမ်းဆိုလို့ မနောလည်း ဒီဇာတ်လမ်းမပြတ်သေးလို့ စိတ်အတော်ညစ်နေတာ
သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ မပုတင်နဲ့ လကွာနေတာ ခုထိကို မရှင်းလင်းမပြီးပြတ်သေးဘူး။ ပြောတာလည်း မရနဲ့ အတော်စိတ်ပျက်တယ်။